Akụkọ - Banyere ketchup
A na-ekesa mba ndị isi tomato na-emepụta ihendori na North America, akụkụ Osimiri Mediterenian na akụkụ ụfọdụ nke South America. Na 1999, nhazi nke ihe ubi nke tomato site na tomato, puputara ihe na-ebido pasent 20 site na 3.14 nde tọn na afo gara aga rue nde 3.75, na-eru ogo kachasi elu na akuko. Onyinye nke akụrụngwa na ngwaahịa karịrị mkpa, yabụ ọtụtụ mba belatara ebe a na-akụ ihe na 2000. Mkpokọta mmepụta nke tomato ngwaọrụ maka nhazi na mba 11 kachasị na-emepụta na 2000 bụ ihe ruru 22,1 nde tọn, nke bụ pasent 9 dị ala karịa nke edere na 1999. United States, Turkey na mba ọdịda anyanwụ Mediterenian belatara site na 21%, 17% na 8% n'otu n'otu. Chile, Spain, Portugal, Israel na obodo ndị ọzọ nwere mbelata nke ịmịpụta ihe eji eme tomato. Ngafe nke afọ gara aga mekwara ka ihe bụ isi mepụtara tomato na 2000/2001 Mkpokọta mmepụta nke tomato mado na mba ndị na-emepụta (ma e wezụga United States) belatara ihe dịka 20% na nkezi, mana ọnụego mbupụ zuru oke site na 13% ma e jiri ya tụnyere. afọ gara aga, ọkachasị ndị Italy, Portugal na Gris.
United States bụ mba kasị ukwuu na-emepụta ma na-azụkwa ngwaahịa tomato. A na-ejikarị tomato ya arụ ọrụ iji mepụta ketchup. Na 2000, mbelata nke mmepụta tomato ya bụ ọkachasị iji belata ngwa ahịa ngwaahịa ngwaahịa tomato n'afọ gara aga ma bulie ọnụ ahịa ngwaahịa dara mbà n'obi nke mmechi nke ndị na-akọ ọka atọ ndagwurugwu, nke kachasị na-emepụta tomato. N'ime ọnwa iri na mbụ nke afọ 2000, mbupụ ngwaahịa tomato na United States belatara site na 1% ma e jiri ya tụnyere otu oge nke afọ gara aga, ebe mbupụ ngwaahịa tomato jiri 4% belata. Canada ka bụ onye mbubata isi mbadamba tomato na ngwaahịa ndị ọzọ na United States. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mbubata na Italytali, ọnụ ọgụgụ mbubata nke tomato na United States belata site na 49% na 43% na 2000.
Na 2006, ngụkọta nke ịhazi tomato ọhụrụ n’ụwa bụ ihe dịka nde tọn 29, ya na United States, European Union na China so n’etiti ndị isi atọ. Dabere na akụkọ nke nzukọ tomato ụwa, na afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-eji 3/4 nke ngụkọta mmepụta tomato na ụwa iji mepụta tomato mado, na kwa afọ a na-ewepụta tomato mado ihe dị ka nde 3.5. China, Italy, Spain, Turkey, United States, Portugal na Gris bụ pasent 90 nke ahịa mbupụ tomato zuru ụwa ọnụ. Site na 1999 rue 2005, nkpa China nke mbupụ tomato mịrị wuru site na 7.7% rue 30% nke ahịa mbupụ ụwa, ebe ndị nrụpụta ndị ọzọ gosipụtara usoro ọdịda. Droppedtali si na 35% daa 29%, Turkey si na 12% gaa 8%, na Gris site na 9% gaa 5%.
Osisi tomato, nhazi na mbupụ ya na China na-aga n'ihu na-eto eto. Na 2006, China haziri nde tọn 4.3 nke tomato ọhụrụ ma mepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 700000 nke mado tomato.
JUMP MAKA (SHANGHAI) LIMITED isi ngwaahịa bụ tomato mado, peeled tomato ma ọ bụ gbajiri iberibe, seasoned tomato mado, tomato ntụ ntụ, lycopene, wdg Tomato tapawa na nnukwu ngwugwu bụ isi ngwaahịa ụdị, na ya siri ike ọdịnaya kewara 28% - 30% na 36% - 38%, ọtụtụ n’ime ha juru na akpa lita 220 l. 10% -12%, 18% -20%, 20% -22%, 22% -24%, 24% -26% tomato ihendori jupụtara tinplate nwere ike, karama Pee na karama iko.